WARAYSI AAN LA YEELANAY LAACIB JOORJE Login
Current Articles Archives Search WARAYSI AAN LA YEELANAY LAACIB JOORJE
Written by webmaster at 1:47 PM on Tuesday, December 02, 2008 Tweet
Waxaa noo suura gashay in aan wareysi la yeelano goolhayihii naadigii Badda iyo weliba xulka Qaranka kubadda cagta Soomaaliyeed, hadii uu xasuustiinu ka tirmay aan dib u jaleecano midka uu yahay, laacibkaas magaciisa oo buuxa waa
Xasan Sheikh Awees, oo ku magac dheeraa (Joorje).
Ma xasuusan kartaa xiligii aad ku biirtay kooxdii aad caanka ku ahayd? Joorje: Aad iyo aad waxaa jirta kooxdii aan caanka ku ahaa ee la oran jiray Badda, anigoo ku biiray sanadii 1974-tii lana soo joogay ilaa iyo bur burkii, lana qaybsaday Guulo aad u tiro badan.
Ma noo sheegi karta xiligii kuugu horeysay ee aad matasho xulka Qaranka Soomaliyeed iyo meesha uu ku wajahnaa sanadaas ? Joorje: Waxaan Qaranka Soomaliyeed ku biiray sanadii 1974 xiligaas oo aan safar u galnay wadanka Ugandha.
Guushii ama guul daradii kuugu xumayd ee ku soo marta intii aad cayaaraha ku jirtay, wax ma ka xasuusataa ?
Joorje: Hadaan ku hor maro Guuldaradii I soo martay waxaan xasuustaa cayaar haddii aan guulaysano ama barbardhac aynu galno aan ku qaadi lahayn koobka horyaalka dalka Soomaaliya, cayaartaas oo na dhex martay anaga iyo kooxda Horseed sanadii 1978-dii. Waxaana nalooga badiyey 2 - 1 gool, marna ma hilmaamo cayaartaas.
Maxaad hada qabataa ? Joorje: Hadda waxaan tababaraa ciyaal yar yar ah, oo la rabo inay noqdaan goolhayayaal mustaqbalka danbe, waxaana soo aruuriyay naadiga F.C.ELMAN .
Cumargedo, Joorje, Black, Cabdulaahi Siyaad iyo Muxudiin Jabaan
Waxaa soo Waraystay: Mahad Axmed Tagoow Kubadda.com - Xafiiska Muqdisho Email: mahad@kubadda.com
16627 Views :: 395 Comments :: :: Sports News, Football